Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe - China Industrial sprocket Suppliers & Factory
Emeputa ulo oru
Mgbapu ọgba tum tum
Sprocket ụlọ ọrụ
Anyị bụ ndị ọgba tum tum sprocket ụlọ ọrụ; Nwere ike inye ndị ọzọ ọgba tum tum akụkụ, ụlọ ọrụ sprocket nwekwara1) Oge nnyefe ngwa ngwa 2) Ezigbo ihe omuma nke onye na-eche nche 3) qualitydị dị elu na asọmpi asọmpi 4) A ga-enye ihe atụ ndị a na-enye n'efu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. 5) Tụlee site n'akụkụ ndị ahịa anyị iji nyere ha aka ịchekwa ego 6) Ihe: 1023 (A3) nchara, 1045 (45 #) nchara, 16Mn 7) Ọgwụgwọ ọkụ: Nnukwu mgbanye quenc, carburization 8) Ọgwụgwọ ihu: Sandblasting, kpaliri , Mpempe okpu, eserese, galvanized wdg. Speciali ...
Anyị nwere ike ịnye gia dị ka ndị ahịa ịbịaru. Gụnyere ngwa igwe, ngwa ike dị elu, ngwa helical, herringbone, akụrụngwa okpukpu abụọ, mgbanaka gia, ogwe osisi na ihe ndị ọzọ. Usoro mmepụta gia: Modeldị ihe atụ: Ngwongwo ike dị elu DP: 0.6 ka 3 Module: 6 ka 40 dayameta: 200 gaa 3000 mm Ala ezé: AGMA 13 Ọkọlọtọ: AGMA, ISO, DIN, JIS Ihe: Ngwaọrụ ahaziri nkewa nkenke eserese tebụl mmekọrịta akara akara Nkenke akara ule Nhazi mmadụ n'otu n'otu F r ISO; GB / T 3 4 5 6 7 ...
Gear maka Disposable Mask Machine
Isi Nkọwa ngwa ngwa ihe: 45 #, Q235,20CrMo, Igwe anaghị agba nchara na ndị ahịa requirment. Ọkọlọtọ: Ebe ISO si malite: Hebei, China Ahịa aha: SHUANGKUN Nọmba Nlereanya: ahaziri Ngwa: gearlọ ọrụ mmepụta ihe Ọgwụgwọ: ishingkpụcha na nhazi Nhazi: Hobbing Ọgwụgwọ Ọkpụkpụ: Ike Ezigbo Keyway: Nhazi mmezu: Customizable Type: Standard Chain Wheel Color: Nature Ojiji: Indurstry Product aha: Drive Sprocket Gear Suppl ...
Gear maka Igwe Nkpuchi Ihu
Steel machining Hardware mapụtara Parts Nzipu Gear
Sprocket ọkọlọtọ maka Chain Roller
Mechanical Sprocket Nzipu Sprocket
China mere ọkachamara ahaziri iche iche udi Chain Sprocket
Nkọwapụta 1. TS 16949 onye nyochapụtara 2. OE mma 3. Anyị nwere ike ịmepụta ụdị ụdị ọ bụla maka ihe ị chọrọ 3) Nkịtị modal bụ n'etiti 1.5 ~ 3 4) nhazi: nkenke-ekpo ọkụ na oyi na-atụ ibe ya bụrụ, nkenke machining Ma mpịakọta akpụ 5) Okpomọkụ ọgwụgwọ: Annealing, normalizing, carbonitriding, Carburizing, tempering 6) P ...
Nnyocha nke usoro ntinye usoro akwa akwa ...
Okpomoku ogwu oku na nhazi ...
Obodo Shimenqiao, Obodo Renqiu, Mpaghara Hebei, China